ပေးစပ်ချင်နေသော – Grab Love Story
မုတ်သုန်လမင်း ..မနေ့ညက စိတ်တွေ တအား ထန်ခဲ့ရ သည် .. ။ ကာမစိတ်တွေ ထကြွ ခဲ့ရ သည် . .။ ပေါင်ကြားဂွဆုံက ရတနာရွေကြုတ် က အရေတွေ စိုစိုရွဲ ရတဲ့အထိပါဘဲ . .။ ဇော်ဇော်လတ်ကြောင့်ပေါ့ ။ သူ ..သူ ..မုတ်သုန်ကို အပီကိုင်လို့ . .။ မုတ်သုန် သည် ကရေးဇီး ဂဲလ် ဆိုတဲ့ ကာရာအိုကေ ဆိုင်မှာ လုပ်နေတာ သုံးလ လောက်ရှိပြီ . .။ ကရေးဇီးဂဲလ်မှာမလုပ်ချင်ပေမဲ့..အခြေအနေအရ .နေစရာ . စားစရာ လိုနေတာကို ဖြေရှင်းလိုက်ရတဲ့ သဘော . ။ ဒီဆိုင် က အမျိုးသမီး အဆောင်တခုမှာ နေစရာပေး သည် ..။ နေတဲ့ နေရာ နဲ့ ဆိုင်ကို အသွားအပြန် ဖယ်ရီ အကြိုအပို့ လုပ်ပေးသည် . .။ အမှန်တကယ် လုပ်ချင်တာ က ..မော်ဒယ်လ် ..။ ဗွီဒီယို မင်းသမီး . .။ ဒါကြောင့်လဲ ရန်ကုန် ကို ထွက်လာတာ ဖြစ်သည် .. ။ မိဘ က ဘယ်သဘောတူမလဲ . .။ ဆယ်တန်းနှစ်ခါကျအပြီး . ….ရန်ကုန်က အဒေါ်ဆီ အလုပ်လေး ဘာလေး သွား စနဲနာမည် ဆိုပြီး ထွက်လာတာ .. ။ မုတ်သုန်..သည် ဖြူဖွေးချောမော..တောင့်တင်း သော ကောင်မလေး ဖြစ်ပေမဲ့ ချို့တဲ့ ဆင်းရဲ သည် ။ ဆယ်တန်းကလဲ မအောင်နိုင် . .။ဆက်လဲ မတက်ချင်တော့ . .။ မနေ့ည က အခုဘဲ နိုင်ငံခြား က ပြန်လာကြ သည် ဆိုတဲ့. သဘောင်္သား တစု နဲ့ အမှောင်ခန်းထဲ ထိုင်ရသည် . .။ ဒီလူတွေက .. သီချင်းဆို ချင်လို့ လာကြတာမဟုတ်ဘူး . .။ ကာရာအိုကေ စက်ကို ဖွင့်တောင် မဖွင့်စေချင် ..။ သူတို့ က မုတ်သုန်တို့လို ကောင်မလေးတွေ ကို .. အမှောင်ထဲ ကိုင်ချင် နှိုက်ချင်ကြလို့ လာကြတာပါ . .။ မုတ်သုန် ကို ဇော်ဇော်လတ် ဆိုတဲ့ လူ က စရောက်ထဲက ဖက်ထား သည် . .။ မုတ်သုန် လက်ထဲကို တ ဒေါ်လာတန် ပိုက်ဆံတွေ တထပ်ကြီး ထည့်ပေး သည်…။ ..သူအခုမှ..နိုင်ငံခြားက..ပြန်လာတာကို..ကြွားချင်နေသလိုဘဲ..အင်းလေ. .ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် .. ပိုက်ဆံရလို့ မုတ်သုန်ကတော့ ကျေနပ် သည် . .။
ဇော်ဇော်လတ် က မုတ်သန် စားချင်တာ စား လို့ ပြောလို့ မုတ်သုန် လဲ .. ထောပတ်သီးဖျော်ရည်တခွက် မှာသောက် သည် .. ။ဇော်ဇော်လတ်ကတော့ ဘီယာသောက် သည် . . ။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ က အခန်း တခုထဲမှာ .. မလွတ်လပ်ဘူးဆိုပြီး တခြားအခန်း ထပ်ယူပြီး ပြောင်းသွား သည် . .။ ဇော်ဇော်လတ် နဲ့ မုတ်သုန် ဘဲ အခန်းထဲမှာ ကျန် သည် . .။ဇော်ဇော်လတ် မုတ်သုန် ကို စပြီး နမ်းလေ သည် . .။ မုတ်သုန် သည် အစိမ်း သက်သက်တော့ မဟုတ် . .။ မြစ်ကြီးနား မှာတုံးက မုတ်သုန်မှာ ရီးစား ရှိဘူး သည် . .။ မုတ်သုန်ရီးစား လဗျ က လက်သွက် သည် . .။ မုတ်သုန် နဲ့ ချိန်းတွေ့တိုင်း . .မုတ်သုန် ကို နမ်း သည်..ကိုင် သည် . .နှိုက် သည် . .။ မုတ်သုန် ကို လဗျ က အဆုံးစွန်အထိ လုပ်ချင်သည် . .။ သို့ပေမဲ့ အခြေအနေ မပေးခဲ့ .. ။မုတ်သုန် အပရိက ..အပြင်ဘန်းတော့ တော်တော် ကြုံဘူးသည်..။လဗျ က နောက်ဆုံး အဆင့်အထိ မလုပ်ဖြစ်တာကြောင့် မုတ်သုန် သည အပျိုစစ်သေး သည် လို့ ပြောနိုင်သည် . .။ ဇော်ဇော်လတ် က ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လူငယ်တယောက် ဆိုတော့ မုတ်သုန်လဲ ရင်ခုန် ပါ သည် ..။ ပိန်ပါး သန့်ပြန့်တာကြောင့် သူ ဖက်တာ ကိုင်တာ ကို သိပ် မငြင်းပယ်ဖြစ်ဘူး . .။ မုတ်သုန် လဲ သွေးနဲ့ ကိုယ် ..သား နဲ့ ကိုယ်ဘဲလေ . .။ သာယာမိပါ သည် . .။ ဇော်ဇော်လတ် သည် မိန်းမ နဲ့ ယဉ်ပါး .နေသူ ..မိန်းမ.. ကိုင်နေကျ..၀ါရင့် ပညာသည် တယောက်ပါဘဲ . .။ မုတ်သုန် သည် သူ့ လက်တွေ . .ပါးစပ် .နွုတ်ခေါင်း . .နွုတ်ခမ်းတွေ ရဲ့ ဆက်တိုက် ထိတွေ့ ပွတ်သပ် စုတ်လျက်မွုကို ဒလစပ် ခံရတော့တာဘဲ . . ။ မုတ်သုန် လဲ ရီးစား ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ လဗျ ရဲ့ အကိုင်အနမ်းတွေ နဲ့ ကင်းဝေး တာကလဲ ကြာနေပြီ ဖြစ်တော့ ဇော်ဇော်လတ်ရဲ့ အထိအတွေ့တွေကို .နဲနဲ စိတ်ပါသွားမိ တာ ဝန်ခံရမှာပါဘဲ . .။ ဇော်ဇော်လတ် က ဘယ်နေရာမှ မလွတ်ဘူး . .။ မုတ်သုန် ရဲ့ နို့တွေကို ဝတ်ထားတဲ့ ဘလောက်စ် အောက်က လက်လျို ..ဘရာကိုပင့်တင်ပြီး ကိုင်သည် ။ နို့သီးလေးတွေကို သူလက်မနဲ့လက်ညှိုးသုံးပြီး ..ချေကစားတော့ မုတ်သုန် ဖင်တကြွကြွ ဖြစ်ရသည် . .။နို့နှစ်လုံးကို နယ်ဖတ်တာလဲ . .နံပြားရိုက်ဖို့ ဂျုံ နယ်နေတာကြနေတာဘဲ . .။မုတ်သုန် ဖင်တွေကိုလဲ ကောင်းကောင်း ကိုင်သည် . .။
ဖင်ကြားထဲကိုပါ သူ့ လက်ချောင်းတွေ က နှိုက်သည် ။ဖင်ကြွမိပြန်တော့ . .ဖင်အောက်ကလက်လျိုပြီး ရှေ့က အဖုတ်ကို စမ်းတော့တာဘဲ . .။ ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထရပြီး . ရှက်တာအရမ်းဘဲ . .။ သူ့အကိုင်အတွယ်တွေကြောင့် မုတ်သုန် အဖုတ် က အရေတွေ စိုစိုရွဲနေသည် ..။ ဇော်ဇော်လတ် လက်ခလယ်က မုတ်သုန် အဖုတ်ထဲ နှိုက် တော့မုတ်သုန် ထွန့်ထွန့်လူးရပြီး သူ့ကို တအားဖက်ထားမိသည် . .။ သူလုပ်တာတွေနဲ့ သူပေးတဲ့တ ဒေါ်လာတန်လေးတွေ နဲ့ က မတန်တော့ဘူး . .။ မုတ်သုန်လဲ . ပညာတွေ ထုတ်သုံးရတော့တာဘဲ . .။ မြစ်ကြီးနားမှာ ကျန်းမာနေတဲ့ အမေ ကို ဆေးရုံတင်ပစ်လိုက်ရသည် . .။ ရှိနေတဲ့အဖေကို သေပစ်လိုက်ရ သည် . .။ အဖေ မရှိတော့တဲ့ အမေ ကလဲဆေးရုံတက်နေလို့ ကာရာအိုကေ ဆိုင်မှာ လာလုပ်နေရ ပါတယ် ဆိုတဲ့ .မုတ်သုန်ရဲ့သနားစရာလုပ်ဇာတ်ကိုဇော်ဇော်လတ်ကြားရပြီး..ရေရေလည်လည်သ နားသွား သည် . .။ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ . .မုတ်သုန်ရယ် . . ဘာမှ မပူနဲ့ . .ဒို့ ကူညီမယ် . .မုတ်သုန် ကို ဒီဘဝ က လွတ်မြောက်အောင် ကူညီမယ် . . ဇော်ဇော်လတ် သည် သူ့မှာပါသမျှ ငွေတွေ မုတ်သုန် ကို ပေးခဲ့ပြီး မုတ်သုန် ဖြစ်ချင်တဲ့ မော်ဒယ်လ် နဲ့ ဗွီဒီယို မင်းသမီး ဖြစ်အောင်လဲ အဆက်အသွယ် ရှာပေးမယ်လို့ ကတိပေးသွား သည် . .။ ဖော်ဇော်လတ် ရဲ့ အကိုင်အတွယ် . .အပွတ်အသပ် တွေကြောင့် ဇော်ဇော်လတ် ပြန်သွားသောအခါ မုတ်သုန် ရဲ့ ရတနာရွေကြုတ် သည် အရေတွေ စိုရွဲ နေရ သည် . .။ အကိုဇော်လတ် . .ကြောင့်ပေါ့ . .နှိုက်တာ ကိုင်တာက တရားလွန်ဘဲ . … ရီးစားလဗျနဲ့..ကွဲကထဲက..ယောင်္ကျားရဲ့အထိအတွေ့နဲ့. . .ကင်းဝေးနေတော့ . .မုတ်သုန် စိတ်တအား လာရသည် . .။ မုတ်သုန် အဆောင် ကို ဖော်ဇော်လတ် ဖုန်းဆက် သည် . .။ မုတ်သုန် က ညနေမှ အလုပ်ဝင်ရတာကြောင့်နေ့ခင်းပိုင်းမှာ ..လျောက်လည်ပြီး ထမင်းသွားစားကြမယ် ..တဲ့ . .။ မုတ်သုန်က..တယောက်ထဲ..လိုက်ရမှာတော့ ကြောက် သည် . .။ငယ်ငယ်ထဲက အတူ နေခဲ့ကြတဲ့ ..ကိုင်ရာ ကိုပါ ခေါ်ခဲ့လို့ရမလားဆိုတော့ ဖော်ဇော်လတ် က ခေါ်ခဲ့ပါ . .ရတယ်. .ဆိုလို့ ကိုင်ရာ နဲ့ လမ်းထိပ် ကို ထွက်စောင့် သည် . .။ မကြာခင် ဇော်ဇော်လတ် တိုယိုတာကားအဖြူလေးနဲ့ ရောက်လာ သည် ။ မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာ ဒီလို ကိုယ်ပိုင်ကား နဲ့ တခါမှ မသွားဘူးလို့ အရမ်းပျော် သည် . .။ ဇော်ဇော်လတ် က ၁၁နာရီကျော်ပြီ . .ဆာကြပြီလား . .လို့မေး သည် . .။ မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာ ပြုံးပြုံးလေးတွေနဲ့ ခေါင်းလေးတွေ ညှိမ့်ကြသည် ..။ ဇော်ဇော်လတ် က ဖီးလ် ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးတဆိုင် ကို ခေါ်သွား သည် . .။ ကြက်ကင် နဲ့ ထမင်းကျွေး သည် . .။ အိုက်စကလင် လဲ ကျွေး သည် . .။ ဖြူဝင်း သန့်ပြန့်သော မုတ်သုန် နဲ့ တွဲပြီး ..သွားတဲ့ အခါ လူတွေဝိုင်းကြည့်တာ ဇော်ဇော်လတ် သတိထားမိသည် . .။ ပလာဇာ ထဲ ဇော်ဇော်လတ် မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာ လိုချင်တဲ့ ခွါမြင့်ဖိနပ် တွေကို ဝယ်ပေး သည် . .။နာရီတလုံးဆီ လဲ ဝယ်ပေး သည် ။ . မုတ်သုန် က ဇော်ဇောလတ် သဘောကောင်းမှန်းသိတော့ အကဲစမ်းပြီး . .ကိုဇော်. .မုတ်သုန်လေ. .သူများတွေဆံပင်ဖြောင့်ကြ..သလို.. ..ဖြောင့်ချင်တယ် . .ကိုဇော်..လုပ်ပေးမလား ဟင် . .လို့ ပြောကြည့် သည် . .။ ဇော်ဇော်လတ် က .. မုတ်သုန် အတွက်ဆိုရင် . .ကိုဇော် က အားလုံး လုပ်ပေးမှာပေါ့ . . ဆိုပြီး ..အနီးမှာ ရှိတဲ့ ဆံပင်ဆိုင်မှာ မုတ်သုန် လုပ်ချင်တဲ့ ဆံပင်ဖြောင့်တာကို လုပ်စေ သည် .. ။
ဆံပင်ဆိုင်မှာတင် ဇော်ဇော်လတ် ၄သောင်းခွဲ ထွက်သွား သည် . .။ ညနေ အလုပ်ဆင်းရမဲ့ မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာတို့ ကို ဇော်ဇော်လတ် အဆောင်ကို ပြန်ပို့ တော့ . .သူ့ဦးလေး က မုတ်သုန်ကို မော်ဒယ်ဂဲလ် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေး နိုင် သည် . .မကြာခင် တွေ့ပေးမည် လို့ ပြောသည် . .။ မုတ်သုန်ဒီနေ့သူမလုပ်ချင်နေခဲ့ပြီးမလုပ်နိုင်သော..ဆံပင်ဖြောင့်တာကို ဖော်ဇော်လတ်ကြောင့် လုပ်နိင်ခဲ့တာ ကို အရမ်း ကျေနပ်နေသည် ..။ ကိုင်ရာသည်လဲ..မုတ်သုန်နဲ့ကပ်မှီပြီးနာရီတွေ..ဖိနပ်တွေရလို့..အရမ်းသဘောကျ နေသည် ..။အလုပ်ဆင်းတော့..မန်နေဂျာ ကမုတ်သုန် ဆံပင်ဖြောင့်ထားတာ သတိထားမိသည် ..။ အိုးအို . .တယ်မိုက်ပါလား . မုတ်သုန် . .မော်ဒယ်လ်မလေး လိုပါဘဲလား . . လို့ ပြောသည် ။ ညဦးပိုင်း မှာ အခန်းဘိုးတောင် အနိုင်နိင်ပေးနိုင်တဲ့..ဧည့်သည် ချာတိတ်တွေ ခဏ လာတာကလွဲလို့ လူသိပ် မရှိလှ . .။အာပြဲကြီးတွေ နဲ့ သီချင်းတွေ အော်ဆိုနေကြတာ ကို ဘေးကနေ ကူညီရ သည် ..။ သဘောရိုး နဲ့ သီချင်း လာဆိုကြတာ ဖြစ် သည် . .။ ဘာမှလဲ ဘောက်ဆူးငွေ ပေးမသွားနိုင်ကြဘူး ။ ည၁ဝနာရီကျော်ကျော်မှာ ဇော်ဇော်လတ် ပေါက်ချလာ သည် ..သူငယ်ချင်း တယောက်နဲ့ လာ သည် . .။သူ့ သူငယ်ချင်း က ဘိုနီ ..တဲ့ .. ။ မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာ ကို ခေါ်သည် ..။ အခန်းကြီးတခန်းကို ယူသည် ..။ ဇော်ဇော်လတ် က မုတ်သုန် ကို ရောက်ကထဲက ဖက်ထားသည် . .။ ဘိုနီကလဲ ကိုင်ရာ့ကို ဖက်ထား သည် . .။ ဘာသောက်မလဲ . . ဇော်ဇော်လတ် နဲ့ ဘိုနီတို့ ဘီယာသောက်ကြ သည် . .။ မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာ က ဆန်းကစ်စ် သောက် သည် ..။ မန်နေဂျာ က ဧည့်သည် တိုက်ရင် သောက်ကြဖို့မှာထားသည် ..။ဒါမှ ဆိုင်က ပို ရောင်းရမှာမဟုတ်လား . .။ မှောင်နေသော အခန်းကြီးထဲ လေအေးစက်ကြောင့် အေးစိမ့်နေသည် .. ။ ကာရာအိုကေ စက်တွေက ပါဝါ အွန်ထားတာကြောင့် မီးအနီအစိမ်းလေးတွေ လင်းနေတာကအပ တခန်းလုံး မှောင်နေသည် . .။ ဇော်ဇော်လတ်ကမုတ်သုန်ကိုဖက်ခါမုတ်သုန်..နွုတ်ခမ်းထူထူလေးတွေကို စုတ်ယူနမ်းနေခိုက် သူ့ ဘော်ဒါ ဘိုနီက ကိုင်ရာ ကို နို့နှိုက်နေသည် . .။ ကိုင်ရာ က နို့ကြီး သည် .. ။ မုတ်သုန်ထက် နို့ကြီးသည် . .။ ဘိုနီ က . ကိုင်ရာ့ လက်ထဲကို တသောင်း ထုပ်တထုပ် ..ထည့်ထားခဲ့လို့ ကိုင်ရာ လဲ မကြိုက်သော်လဲ ငွေမျက်နှာကြောင့် နို့တွေ ဆုတ်နယ်တာ ခံနေရ သည် . .။ ဇော်ဇော်လတ် လဲ မုတ်သုန် ကို နမ်းနေတုံး . .မုတ်သုန် လက်ကိုဆွဲ ယူကာ သူ့ ပေါင်ကြားကို တင် ကာ ဖိထားလိုက် သည် ..။ ပေါင်ကြား က .. မာမာအချောင်းကြီး ကို မုတ်သုန် စမ်းမိနေသည် . .။
နေ့လည်က ဆံပင်ဖြောင့်တာ..နာရီနဲ့ဖိနပ်ဝယ်ပေးတာတွေ..စုစုပေါင်း…ခုနစ်သောင်းဖိုးလော က်သူမ အတွက် အကုန်အကျခံထားခဲ့တာမို့ ဇော်ဇော်လတ် ကို သူမ အလိုလိုက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း မုတ်သုန် သိပါ သည် . .။ မုတ်သုန် က သူမ လက် ကို ဖယ်ဖို့ကြိုးစားတော့ ဇော်ဇော်လတ် က ပေါ်ကနေဖိအုပ်ကာ ကိုင်ထား သည် ..မာမာအချောင်းကြီးကို…သူကျေနပ်စေရန် ကိုင်ထားပေးရ သည် . .။ . .သူများ . .သိပ် ရင်တုန်တာဘဲကွာ . ..မီးမီးကြောက်ကြောက် . . ဒို့လေ..မုတ်သုန်ကို သိပ်ချစ်မိနေပြီ . . ဖော်ဇော်လတ် လက်တွေ က မုတ်သုန် ဖင်အိအိတွေ ကို ဆုတ်နယ်နေသည် .။ ဘေးမှာချထားတဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိပ် ကို မုတ်သုန်ပေါင်ပေါ်ကို တင်သည် ။ ဒီထဲက ငွေတွေ အားလုံး က မုတ်သုန် အတွက်ဘဲ . . သောင်းထုပ်တွေ တော်တော်များ သည် . .။ မုတ်သုန် တို့ နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း မှာတော့ ဇော်ဇော်လတ် ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဘိုနီ သည် ကိုင်ရာ့နို့ကြီးတွေ ကို တဖက်ပြီးတဖက် စို့ပေးနေသည် . .။ ကိုင်ရာ မျက်လုံးလေး စုံမှိတ်ခါ နုတ်ဖျား က တဟင့်ဟင့်ညည်းကာ ခံနေသည် . .။ ဇော်ဇော်လတ် သည် ဘိုနီ နို့စို့နေတာ မြင်တော့ အားကျသွားပုံရ သည် ။ မုတ်သုန် ရဲ့ ရင်စေ့ အကျ င်္ီလေး ကိုဖွင့် ..ဘရာစီယာလေးကို လှန်တင်ကာ မုတ်သုန် ရဲ့ နို့ လုံးလုံးလေးကို နမ်း သည် . .။ သူ့ နှခေါင်းကြီးနဲ့ .. ပွတ်လှိမ့်ကာ နမ်း သည် . .။ အို . .ကိုဇော်ရယ် . .အိုကွာ . . မုတ်သုန် နို့သီးလေး သူ့ ပါးစပ်ထဲ ရောက်သွား သည် . .။ အို…သူ..သူ…သူ့လျာထိပ် နဲ့ တို့တို့ကစားနေသည် . .။ မုတ်သုန်မှာ..တုန်ခါနေတာဘဲ။.သူ့လျာကြီးက..နို့သီးလေးကို…ယက်လိုက်..နွုတ် ခမ်းတွေနဲ့ ငုံပြီးစို့လိုက် ..လုပ်နေတော့ မုတ်သုန် လူးနေရတော့သည် ..။ သူတို့ နဘေးမှ ဘိုနီ သည် ကိုင်ရာ ရဲ့ နို့တွေကို တဝကြီး စို့ပြီးပြီမို့ ကိုင်ရာ ရဲ့ ထမိန်ကို ဖြေကာ ပေါင်ကြားကို စမ်းနေသည် . .။ အကိုရယ် . .လူတွေ ဝင်လာနိုင်တယ် . .ကာရာအိုကေ အခန်းဆိုတော့ တံခါး က ဂျက်မရှိဘူး . .တော်တော့နော် . . ကိုင်ရာ က တောင်းပန်သလို ပြော သည် . ..။ဘိုနီလဲ အရေတွေ စိုရွဲနေသော ကိုင်ရာ ရဲ့ အဖုတ်ကို အားရအောင် ကိုင်လိုက်ပြီးမှ . .. ဒါဆို ငါ့ဟာကို ကိုင်ပေးဟာ . .ဆိုပြီး သူ့ လုံချည်ကို ဖြေပြီး ကိုင်ရာ့ လက်ကို သူ့ လိင်တန်ပေါ်ကို ဆုတ်ကိုင်စေသည် . .။ အကိုရယ် . .နဲတာကြီး မဟုတ်ဘူး . .မီးမီး ကြောက်ကြောက် . . ကိုင်ရာ က ဘိုနီရဲ့ မာမာနွေးနွေး အတန်ကြီး ကို ဆုတ်ကိုင်ထားရင်း ညုတုတု နဲ့ ပြော လိုက်သည် . .။ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေး . . ကိုင်ရာ လဲ ဘိုနီ့ အတန်ကြီး ကို သူလုပ်ခိုင်းသလို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးနေတာကို ဇော်ဇော်လတ် တွေ့သွားပြီး မုတ်သုန်ကိုလဲ ကိုင်ရာ လုပ်ပေးနေသလိုဘဲ ကွင်းတိုက် ခိုင်းလေ သည် . .။
မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာ လဲ သူများပေးတာကျွေးတာတွေ ယူမိစားမိပြီး တန်ရာတန်ကြေး ပြန်ပေးနေရ သည် ကိုဇော်. .မုတ်သုန် ကို တကယ်ဘဲ စပွန်ဆာ ရှာပေးမှာလား ဟင် . . ဒါပေါ့ . .ရှာပေးမယ် . .အခု အရင်ဆုံး . .ကိုယ့်ကို ကောင်းအောင် .. လုပ်ပေးအုံး .. မုတ်သုန်လဲဇော်ဇော်လတ်ရဲ့တုတ်ခိုင်တဲ့အတန်ကြီးကို..အရေတွေပန်းထွက်လာ တဲ့အထိ ကွင်းတိုက်ပေးရ သည် . .။ကိုင်ရာ ဘက်ကို လှည့်ကြည့်တော့ ကိုင်ရာ့ မျက်နှာမှာလဲ ဘိုနီ ပန်းထုတ်ထားတဲ့ အရေပျစ်ပျစ် ဖြူဖြူတွေ ပေရေနေသည် ။ ဇော်ဇော်လတ် က မုတ်သုန် ကို နံမည်ကြီး ဗွီဒီယို ပရိုဂျူဆာကြီးတယောက် နဲ့ တွေ့ပေးမည် လို့ ကတိပေးသွား သည် . .။ ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ဖို့ လမ်းစတခု ရရေးအတွက် စောစောက ဇော်ဇော်လတ်ကို လုပ်ပေးခဲ့ရတာ ကို မေ့ပစ်လိုက်သည် . .။ ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်လိုက် သည် . .။ နောက်တနေ့မှာ ဇော်ဇော်လတ် လာခေါ်ပြန်သည် . .။ ဒီနေ့ လဲ ဇော်ဇော်လတ် နဲ့ ဘိုနီ တို့ မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာ ကို ဆိုင်ကြီးတဆိုင်မှာ အစားမျိုးစုံခေါ်သွားပြီးကျွေးသည် . .။မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာ လိုချင်တဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဝယ်ပေး သည် . .။ ကားမောင်းနေရင်း ဇော်ဇော်လတ် က တနေရာမှာ ခဏ သွားနားကြရအောင် . .လို့ ပြောသည် . .။ ကိုင်ရာ ရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ သူမ နို့တွေဘဲ အနယ်ခံရမလား ..ကွင်းဘဲ တိုက်ပေးရမလား . .လန့်နေသည် ..။ ဒီဘဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ရတာ မလွယ်ဘူး . .ဝွူး…။ ကိုဇော်.. ပရိုဂျူဆာကြီး ဆီ ဘယ်တော့ သွားကြမှာလဲ . . သွားချင်လား . .ကိုဇော့် ကို မုတ်သုန်က လက်ဆောင်တခု ပေးရင် ခေါ်သွားမယ် ပေးမှာပေါ့ . ကိုဇော်က ဘာလိုချင်လို့လဲ . . အနမ်း . . ဒီလောက်တောင် ခဏခဏ နမ်းနေတာဘဲ ကိုဇော်ရယ် . .အနမ်း က ဘာဆန်းတော့လို့လဲလို့ .. ဟင့်အင်း . .ကိုဇော်က နမ်းမှာ မဟုတ်ဘူး . .မုတ်သုန် က နမ်းပေးရမှာ . . ဘယ်လို . .မုတ်သုန်က နမ်းလဲ နမ်းတာ အတူတူဘဲ မဟုတ်ဘူးလား . . ဟင့်အင်း . .မတူဘူး . .ဒီလို နမ်းပေးဖို့ပြောတာ . .ဇော်ဇော်လတ် က သူ့ ဟမ်းဖုန်းက ပုံတပုံ ကို ပြ သည် .. ။ ဟယ်…ယုတ်ပတ်တယ် . ..။ ကောင်မလေးတယောက် က ယောင်္ကျားအတန်ကြီးတချောင်းကို စုတ်နေတဲ့ ပုံကြီး ဖြစ်သည် . .။ ဇော်ဇော်လတ်က သူ့ အတန်ကို စုတ်ပေးစေချင်တာကိုး ။ ဒါတော့ မုတ်သုန် မလုပ်ချင် . .။ ကိုဇော် က ရီးစားလဲ မဟုတ် ..။ ဘာမှလဲ မဟုတ်…။ မုတ်သုန် ကို ဇော်ဇော်လတ် က ဟိုတယ်ကြီးတခု ကိုသွားမည် လို့ ပြော သည် . .။ မုတ်သုန်လဲ ညနေ အလုပ်ဝင်ချိန်နီးလာပြီ လို့ . . အကြောင်းပြပြီး ငြင်း သည် . .။ မုတ်သုန် . . ဟင်..ဘာလဲ ကိုဇော် . . ဘယ်တော့ စောစောကလို နမ်းပေးမှာလဲ . . တနေ့နေ့ပေါ့ . . ဒီနေ့လား . . စောသေးတယ် ကိုဇော်ရယ်. .ညက..ကိုဇော်ပြီးသွားအောင်..တိုက်ပေးခဲ့တာဘဲ မဟုတ်လား ဖော်ဇော်လတ် က သိပ်မကျေနပ်ပေမဲ့ အတင်းအဓမ္မကြီး လဲ မလုပ်လိုလို့ မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာတို့ကို နေတဲ့ အဆောင်ပြန်ပို့သည် . .။ အဆောင်ရောက်တော့ ကိုင်ရာ က .. မုတ်သုန်ရယ် . .ကိုဘိုနီ ဆိုတဲ့ လူကြီး က အရမ်းကြမ်းတာဘဲ . .ငါ့နို့တွေ နာကျင်နေတာဘဲဟာ . . လို့ ပြောလို့ မုတ်သုန်လဲ ကိုင်ရာကို သနားသွား သည် ..။
ဘော့စ် . ..တော်မီ ရောက်နေတယ် . .ဘော့စ်နဲ့ တွေ့ချင်လို့တဲ့ . . ကောင်းပြီ..ခေါ်လိုက်ကွာ . .အော်..ရဲမြင့် .. မော်ကြီး ဆိုတဲ့ ကောင်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်..ကား လာပြလို့ရပြီ လို့ . . ဟုတ်ကဲ့ . . ဦးဟိန်းဇံ ..ရေကူးကန်ဘေး က ရောင်စုံထီးကြီးအောက်မှာ အနှိပ်ခံနေသည် ..။ ဘီကီနီရေကူးဝတ်စုံ အနီရောင်ဝတ်ထားတဲ့ကောင်မလေးတယောက် က ဦးဟိန်းဇံကို နှိပ်ပေးနေသည် .. ။ တော်မီ ရောက်ပါပြီ..ဘော့စ် . . ဦးဟိန်းဇံ သည် မှောက်ရက် အနှိပ်ခံနေတာ ဖြစ်သည် . .။ဦးဟိန်းဇံ မှောက်ရက် အနေအထား နဲ့ တော်မီ ရဲ့ ခြေထောက်ကိုဘဲ ကြည့်ပြီး မေး သည် . .။ ဆို . .တော်မီ ဘာထူးလဲ . . ထူးတယ်. .အန်ကယ်. ..အန်ကယ်.စပွန်ဆာ..လုပ်ဖို့..အလန်းလေးတယောက် ရထားတယ် . .အန်ကယ် . . ဟေ . . ဦးဟိန်းဇံ စိတ်ဝင်စားသွားပုံရ သည် . .။ သင်ဇာ . .ခဏရပ်. .ငါ့အတွက် . .ဂျု့စ်သွားယူစမ်း . . ဟုတ်ကဲ့ ဘော့စ် . . ဘီကီနီ အနီရောင်လေးနဲ့ဦးဟိန်းဇံကို နှိပ်ပေးနေတဲ့ ကောင်မလေး ..ထပြီး တိုက်ကြီး အနောက်ဖက် အပေါက်ဆီ ကို ကနွဲ့ကရ ..နဲ့ လျောက်သွားသည် ။ ကဲ ပြော..တော်မီ . . အန်ကယ်လ်..တကယ်လန်းတဲ့ ဟာလေး . .အန်ကယ်လ် . .အန်ကယ်လ်ကြိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းလေး . .. ဟေ..ဟတ်ဟတ် . .တယ်ဆိုတဲ့ စာပါလား . .တော်မီ . . မှောက်နေရာက ပက်လက်လှန်လိုက်သည် . .။ တော်မီကိုကြည့်သည် . .။ ဓါတ်ပုံပြလေကွာ . . ဟုတ်ကဲ့…ပါလာပါတယ် . . တော်မီက သူ့ဟမ်းဖုန်းထဲက ပုံတွေကို ပြ သည် . .။ ဦးဟိန်းဇံ မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်သွား သည် ..။ ဟမ်းဖုန်းထဲက..ကောင်မလေးပုံကို သေသေချာချာ ကြည့်နေသည် ..။ ဟ..မဆိုးပါလား . .တော်မီ ရ . . အန်ကယ်လ် တင်လိုက်ရင် တော့ပ်မော်ဒယ်လ် ဖြစ်သွားပြီး ဗွီဒီယို မင်းသမီး ထိပ်တန်းတယောက် ဖြစ်လာမှာ သေချာ တယ် . . အေး . .အရင်ဆုံး ထုံးစံအတိုင်း . .မသိမ့်ဆီ ခေါ်သွားကွာ . .ကျန်တာ သိမ့်သိမ့် ဆက်လုပ်လိမ့်မယ် . . ဟုတ်ကဲ့ . .အန်ကယ်လ်. . ကဲ တော်မီ . .မင်း ကုန်ကျတာတွေ . .ရဲမြင့် ဆီက ယူသွားကွာ . .မင်းတော်တယ် . .တော်မီ. .မင်းမဆိုးဘူး . .ဟားဟား.. သင်ဇာ ဆိုတဲ့ ဘီကီနီအနီလေးနဲ့ ကောင်မလေး ..သင်္ဘောသီးဖျော်ရည်နဲ့ ပြန်ရောက်လာ သည် . .။ ရဲမြင့် . . ဗျာ . .ဘော့စ် . . တော်မီကို ကုန်ကျစားရိတ် ထုတ်ပေးလိုက်ကွာ . .ပိုပိုသာသာလေး . . ဟုတ်ကဲ့ .. ဘော့စ် . . သူ့အနားက ရဲမြင့်နဲ့အတူ ထွက်သွားသော တော်မီကို ခပ်လှမ်းလှမ်းရောက်မှ လှမ်းခေါ်လိုက်သည် ။ ဟေ့..တော်မီ. . အန်ကယ်လ် . . မင်း . .၀ါးပြီးသားကြီးများလားကွာ . . မဟုတ်ပါဘူး..အန်ကယ်လ် . .ပါကင်လေးပါ..ဟဲဟဲ ..စိတ်ချပါ . . ဦးဟိန်းဇံ က ဘီကီနီအနီနဲ့သင်ဇာ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ကမ်းပေးတဲ့ သင်္ဘောသီးဖျော်ရည်ခွက်ကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး သဘောကျစွာ တဟားဟား အော်ရယ်လေ သည် . .။ တော်မီ ခေါ် ဇော်ဇော်လတ် သည် ပစ္စည်းသန့်သန့်လေးတွေ တွေ့ရင် ဦးဟိန်းဇံ ဆီကို ခေါ်လာတတ် သည် . .။ ဘော့စ်…ကားပွဲစား မော်ကြီးရောက်လာပါပြီ . . အေး .. ငါလိုချင်တဲ့ကား သူယူခဲ့လား . . ယူခဲ့ပါတယ် . . ဒီအနားကို မောင်းလာခိုင်းလိုက်ကွာ . . ငွေမှင်ရောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေသော မာစီးဒီးဘင့်ဇ် အက်စ်၅၅၀ ကားကြီး မကြာခင် တိုက်ာကီးဘေးက လမ်းကလေးကနေ ရေကူးကန်ကြီးနဘေး မှာအနှိပ်ခံနေသော ဦးဟိန်းဇံ အနားကို ရောက်လာ သည် . .။
ကားပွဲစားမော်ကြီး . .ဦးဟိန်းဇံရှေ့ရောက်လာသည် . .။ မော်ကြီး . . ဗျား . .ဆရာကြီး . . ငါ အဓိက မေးချင်တာ တခုဘဲ ရှိတယ် . .ဒီကား ကို မြန်မာပြည် ရောက်ပြီးတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ . .ဘယ်သူ စီးပြီးပြီလဲ . . ဆိပ်ကမ်းက ရွေးထုတ်လာတာ ၃ရက်ဘဲ ရှိပါသေးတယ် . .ဆရာကြီး ဝယ်ရင် ဆရာကြီး က ဖါ့စ်အုန်နာပါ . . အေး . .ဒါဆို ငါ ဝယ်မယ် . .ကားကိုတော့ မကြည့်တော့ဘူး . .မင်းက ငါ့ကို ဘတ်မဲ့ကောင် မဟုတ်ပါဘူးလေ . . သင်ဇာ ဆိုတဲ့ ဘီကီနီ အနီရောင် နဲ့ ကောင်မလေး က .. အန်ကယ်လ်ဇံ . .ကားက အရမ်းလှတာဘဲ . .ဘယ်တော့ စီးရမှာလဲဟင် . . လို့ မေးသည် . .။ ဦးဟိန်းဇံ လဲ သင်ဇာရဲ့ ဖင်ကားကားလေးကို ဖန်းကနဲ သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ ရိုက်လိုက်ရင်း . . စီးရမှာပေါ့ …ကဲ..မစီးခင် အခု သွားခီးလိုက်ကြအုံးစို့ . .လို့ပြောလိုက်ရာ..သင်ဇာလဲ ဟင့် အန်ကယ်လ်ဇံ..နော်. .သိပ်ကဲတာဘဲ . လို့ ညုတုတုနဲ့ ပြောလိုက်ရင်း တိုက်ကြီးဘက်ကို ပြေးထွက်သွားသည် . .။ ဦးဟိန်းဇံလဲတဟဲဟဲသဘောကျရင်းဖင်တုံးတွေ…တုန်ခါရမ်းနေအောင်ပြေးထွက် သွားသော သင်ဇာရဲ့ နောက်ကို .. လိုက်သွားပါတော့ သည် . .။ သင်ဇာ သည် ရေချိုးခန်းထဲ က ရေပန်းကိုဖွင့်ကာ ရေပန်းအောက်ကို ဝင်လိုက်သည် ။ရေချိုးခန်း နံရံ က ခွက်ထဲက ဆပ်ပြာတုံးကို လှမ်းယူ ကာ တကိုယ်လုံး ကို ပွတ်သပ် ဆပ်ပြာတိုက်သည် ။ အန်ကယ်လ်ကြီးက သန့်မှ ကြိုက်သည် . .။ သင်ဇာသည်..သူမပေါင်ကြားဂွဆုံအင်္ဂါစပ်တဝိုက်ကိုသေသေချာချာပွတ်သပ်ဆေး သည် ..။ဟွန်း..အန်ကယ်လ်ကြီး အကြောင်းကို သိလို့ပါ . .။ သူက သင်ဇာ့ .. အဖုတ်က လှလွန်းလို့ ဘာညာသရကာနဲ့ပြောပြီး မွုတ်နေမှာ စိုးလို့ . .။ ဟော..အန်ကယ်လ်ကြီး ဝင်လာပြီ . .။ ဟင်း . .သိသားဘဲ . .အန်ကယ်လ်ကြီး အရမ်းထန်နေပြီ ဆိုတာ . . ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်နေတဲ့ အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ လိင်တန်တုတ်တုတ်ကြီး သည် တောင်မတ်နေသည် ..။ သင်ဇာ ဒီအတန်တုတ်တုတ်ကြီးကို အမြဲ စုတ်ပေးနေရ သည်. .။ အန်ကယ်လ်ကြီး သည် သင်ဇာ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ပြီးတတ် သည် . .။ ကဲ..သင်ဇာ ..လာစုတ်တော့ကွယ် . .အန်ကယ်လ် ထန်နေပြီ . .. မုတ်သုန်လမင်း…နော်. .. .။ ဟုတ်ကဲ့ပါ . . ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ သည် ရွေကိုင်းမျက်မှန်အဝိုင်းလေး တပ်ထားတဲ့ မျက်လုံး ၀ိုင်းစက်စက်တွေနဲ့ မုတ်သုန် ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး အကဲခတ် ..ကြည့်ရွု သည်။
ဒို့တတွေရဲ့ဘော့စ်ကမင်းကိုတွေ့ချင်တယ်… . သူ..သဘောကျရင်..စပွန်ဆာပေးရင်. .မင်းဟာ..တော့ပ်မော်လ်ဒယ်လ်တယောက် တမဟုတ်ချင်း ဖြစ်လာမှာဘဲ . .မင်း..ဖြစ်ချင်တယ်မွုတ်လား . . ဟုတ်ကဲ့ရှင့် . .ဖြစ်ချင်ပါတယ် . . တော့ပ်မော်လ်ဒယ်လ် တယောက် ဖြစ်လာရင် မင်းကို ဗွီဒီယို မင်းသမီးအဖြစ် တင်ရိုက်ချင်တဲ့ လူတွေ တပုံကြီး တန်းစီနေလိမ့်မယ် . .ဒီတော့ မင်းက မော်လ်ဒယ်လ်မ တယောက် ဖြစ်လာရုံနဲ့တင် ကျေနပ်လို့ မရဘူး . .အိုက်တင်. .တွေ ကျင့်ရမယ် .. ဒေါ်သိမ့်သိမ့် သူ ကို မုတ်သုန် မဂ္ဂဇင်း ..ဂျာနယ်တွေမှာတွေ့ဘူး သည် . .။ ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ သည် မော်ဒယ်လ်သင်တန်းတွေ ဖွင့်ထား သည် . .။ အသက်၃၀ လောက်လို့ ခန့်မှန်းရသော ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ သည် .ရုပ်ရော ကိုယ်လုံးရော အင်မတန်မှ လှပကျော့ရှင်းသူ မိန်းမချောလေးတယောက်ပါဘဲ . .။ ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ ..အတွင်းခန်းကို လှည့်ပြီး . . ရိုလင်. . လို့လှမ်းခေါ် သည် . .။ ရက်စ် . .. ဘေဘီ . . အသက်၎ဝကျော်လောက်လို့ ခန့်မှန်းရသည့် နံမည်ကြီး မိတ်ကပ်ဆံပင် အလှဖန်တီးရှင် . .ရိုလင်မော် ကြွကြွလေး ထွက်လာ သည် . .။ ဒီမှာ…ရိုလင်..မုတ်သုန်လမင်း . .တဲ့..။ ဘော့စ် စိတ်ဝင်စားတဲ့အသစ်ကလေး . .ဘော့ ကို သွားမတွေ့ခင် ရိုလင် နဲ့ သိမ့်နဲ့ ..ရှိုင်းပေးကြရမယ် . . ရိုလင် က မုတ်သုန်ကို စေ့စေ့ကြည့်ကာ .. နဂိုရှိရင် နဂိုင်းထွက်တာပေါ့…. ဘေဘီ . .ကြည့်ရတာ မုတ်သုန်က နဂိုရှိပြီးသားပါ . .အိုကေမှာပါ . . လို့ ပြောသည် ။ ကဲ..မုတ်သုန်. .မော်ဒယ်လ်တယောက် ဖြစ်လာဖို့…စလုပ်ကြစို့ . . မုတ်သုန်လေ . .ပျော်လိုက်တာ .. .။ ဇော်ဇော်လတ် ကိုလဲ ကျေးဇူးတွေ တင်မိသည် ။ သူ့ကို စပွန်ဆာပေးမဲ့ ဘော့စ်ကို မတွေ့ရသေး .. ။ ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ နဲ့ ရိုလင်တို့ က အနီးကပ် ထရိန်နာတွေ ဖြစ်လာသည် . .။ ဆံပင်ပုံစံပြောင်းရသည် ။ သွားတွေ ပြုပြင်ရသည် . .။ သွားတွေ ဖြူအောင်ချေးချွတ်ရသည် .. ။ဆရာဝန်နဲ့လဲ ဆေးစစ်ရသည် ..။ စပွန်ဆာလုပ်မဲ့ ဘော့စ် က စေ့စပ်သေချာသူတဲ့ . .။ ရောဂါတွေဘာတွေ ရှိနေရင်..စပွန်ဆာ လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး .. ။ စစ်တဲ့ သူက ဆရာဝန်မ တယောက် ဖြစ်သည် .. ။ သုံးလလောက်ကြာတော့ မုတ်သုန် သည် တသွေးတမွေး ဖြစ်လာ သည် . .။ ကာရာအိုကေဆိုင်မှာ လုပ်နေတဲ့ ကောင်မလေးပုံ မဟုတ်တော့ . .။ ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ နဲ့ ရိုလင် က မနက်စောစောထပြေးခိုင်း သည် . .။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဘေးက လိုက် သည် . .။ ထရက်မေးလ် စက်ပေါ်မှာလဲ ပြေးခိုင်းသည် . .။ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ က အိုက်တင် ..သရုပ်ဆောင်..သင်တန်းလဲ တက်စေသည် ..။ အစမ်းသဘောဗွီဒီယိုလဲ ..တကယ့်ဗွီဒီယို…ထုတ်လုပ်နေတဲ့ လူတွေ နဲ့.. စမ်းရိုက်ကြည့်သည် . .။ ဦးဟိန်းဇံ သူ့ ရုံးခန်းထဲမှာ အလုပ်များနေသည် .. ။ မြန်မာပြည် ရဲ့ စီးပွားရေးလောကမှာ ထိပ်သီးတယောက်အဖြစ် ရောက်ရှိနေဖို့ ဦးဟိန်းဇံ သည် ငယ်ငယ်က ..အလုပ်ကို နေ့မအား ညမအား လုပ်ခဲ့သည် . .။ နောက်ပိုင်း တပည့်လက်ထောက်တွေကဘဲ သူ့အတွက် လုပ်ပေးနေသည် .. ။ ဦးဟိန်းဇံမှာ လုပ်ငန်းတွေ အများကြီး ရှိသည် .. ။ နေရာတကာ သူပါ သည် . .။
ဒန်ပေါက်ဆိုင်..ကြေးအိုးဆိုင် ဖွင့်သလို ဗွီဒီယိုလဲ ရိုက်သည် . .။ကန်ထရိုက်တိုက်တွေလဲ ဆောက်သည် .. ။ အဝေးပြေးကုန်ကားကြီးတွေလဲ ဆွဲနေသည် ။ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် ကန်ပဏီလဲ လုပ်သလို ဘဏ်ကြီးတခုရဲ့ ဥက္ကဌ လဲ လုပ်သည် ..။ အကုန်လုပ်တဲ့လူကြီးလို့..စီးပွါးရေးလောကမှာ..သိကြသည် . .။ ငွေကို ရေလိုသုံးနိုင်တာကြောင့် . .ဦးဟိန်းဇံ ဆိုရင် ဖြုန်သွားကြသည် . .။ ဖျားသွားကြသည် ။ ငွေကိုဗုံးဘလအော သုံးနိုင်တာကြောင့် ..လေလံဆွဲရင် သူချည်းနိုင်သည် . .။ သူ့ရုံးခန်းကြီးထဲမှာ..သူ ဖုန်းပြောနေသည် ..။ သူပိုင်..အဝေးပြေးကားကြီးတစီး မှောက်လို့ ..သူ လုပ်ချင်တာတွေ နယ်က သူ့ မန်နေဂျာတယောက် ကို စကားပြောနေတာ ဖြစ်သည် .. ။ယာဉ်မောင်း သေသွားတယ်လို့ သူ့မန်နေဂျာ က ပြောလို့ သေသူ ရဲ့ အသုဘကို သူ အစစတာဝန်ယူကြောင်း ပြောနေသည် . .။ ဟေ့..မောင်ဟိုဒင်း . .မင်းနံမည် ဘယ်သူ . . နယ်က မန်နေဂျာလေး က အောင်မင်း..ပါ ဆရာကြီး . . လို့ ဖြေသည် .. ။ အေး..အောင်မင်း . .သေတဲ့ယာဉ်မောင်း က ကလေးကျန်ခဲ့လား . . မကျန်ပါဘူးဆရာကြီး . . သူ့မိန်းမ ကို မင်း ..တွေ့ဘူးလား . . တွေ့ဘူးပါတယ် . .ဆရာကြီး . . ချောလား . . တဖက်က မန်နေဂျာ ရုတ်တရက် အသံတိတ်သွား သည် ..။ ခဏကြာမှ .. ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး ချောပါတယ် . . လို့ခြေသည် . .။ အသက် ဘယ်လောက် ရှိသလဲကွ . . အစိတ်လောက်ပါ ဆရာကြီး . . အေး..နာရေးကိုမင်းအားလုံး..လုပ်ပေးလိုက်.ရက်လည်ရော ဘာရော..လုပ်ပေးလိုက် . .မိန်းကလေး နံမည်က ဘာတဲ့တုံး . . ခင်အေးကြွယ် . .ပါ..ဆရာကြီး . . အေး..အားလုံး ပြီးစီးရင် ရန်ကုန်ငါကရုံးလွတ်လိုက်ကွာ . .ငါ အလုပ်ပေးမယ် . . ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး . . သူ ဖုန်းချလိုက်ပြီး . .ဘေးစားပွဲပေါ်က ရေခွက်ကို ယူ သောက်လိုက်သည် . .။ သူ့ စားပွဲပေါ်က အင်တာကွန်းက အသံထွက်လာ သည် . .။ ရုံးခန်းအပြင်မှာ ရှိတဲ့ သူ့ ကိုယ်ရေးတာဝန်ခံ . .လေးလေးနွယ် ခေါ်တာ . .။ အမ်ဒီ ..ဒေါက်တာမြသီတာ ရောက်လာပါတယ် . .တွေ့နိုင်မလား..အမ်ဒီ. . အေး..အေး..လွတ်လိုက်. . အန်ကယ်လ်ဇံ . . ဒေါက်တာမြသီတာ ဝင်လာ သည် .. ။ လာ..မြသီတာ . .ဘယ်ကလှည့်လာလဲ..မတွေ့တာ ကြာပြီ . . အန်ကယ်လ်..ချက်ကပ်ပ်လုပ်ဖို့လိုနေပြီ. .သမီးဆီမလာတော့..အန်ကယ်လ့်ဆီ သမီးက လာရတာပေါ့ . . အလုပ်က များတယ် သမီးရယ် . .သိတယ်မွုတ်လား . . ဟွန်း.အန်ကယ်လ်အလုပ်များတာသမီးသိပါတယ်..မော်လ်ဒယ်လ်ဂဲလ်တွေစပွန် ဆာ ပေးနေရလို့မဟုတ်လား . . ဒေါက်တာမြသီတာကနွုတ်ခမ်းလေးစူပြီးပြောတော့ဦးဟိန်းဇံ…ရယ်လိုက်တာ..အ ရမ်းဘဲ ။ စေတနာတွေပါ သမီးရယ် . .အန်ကယ်လ်..ကူညီတတ်တာ သမီးလဲ အသိဘဲလေ . . သိတာပေါ့အန်ကယ်လ် . .ဒါနဲ့ လာစ်ဝိ . .က သိမ့်သိမ့်သူ လာသွားတယ် . .အန်ကယ်လ်တင်မဲ့ စပွန်ဆာမလေး ကို ဆေးလာ စစ်တာ ..ဟွန်း . .သိမ့်သိမ့်သူ က ကောင်မလေး အပျိုစစ်ရဲ့လားဆိုတာပါ စစ်ခိုင်းတယ် . .အဲဒါ အန်ကယ်လ် သိချင်တာလား . . မဟုတ်ရပါဘူး . .သမီးရယ် . .အန်ကယ်လ်ဘာမှမသိပါဘူး …. . .သိမ့်သိမ့်သူဘဲ လုပ်နေတာပါ . . မသိပါဘူး.အန်ကယ်လ်ကအခုထိ..အပျိုစစ်စစ်လေးတွေ…လုပ်ချင်နေတုံးဘဲလား လို့ . . ဦးဟိန်းဇံ ..သည် ဒေါက်တာမြသီတာ ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် သူမ . ဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပေ သည် ..။
ဒေါက်တာမြသီတာ သည် နယ်မြို့ကလေးတမြို့ က နွမ်းပါးတဲ့ လယ်သမားလင်မယား က မွေးတဲ့ ဆင်းရဲသူလေးတယောက်ပါ။ ဦးဟိန်းဇံ က ကျောင်းထားပေးပြီး အခုလို ဆရာဝန်မတယောက် ဖြစ်လာသည်အထိ ဘဝတိုးတက်လာရသူလေး ဖြစ်ပေ သည် ။ ဦးဟိန်းဇံ ကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်တဲ့ ဒေါက်တာမြသီတာ သည် သူမ ရဲ့ အပျိူစင်ဘဝကို ပေးအပ်ခဲ့သည် . .။ သူမပြောလိုက်မှ ဦးဟိန်းဇံသည်မြသီတာနဲ့အိပ်ခဲ့တဲ့..အတွေ့အကြုံ လေးကို ပြန်လည်သတိရသွားသည် .. ။ ထိုစဉ်ကမြသီတာသည်…အပျိုစင်နုနုထွပ်ထွပ်လေးပါ . .။ဦးဟိန်းဇံအလိုကျ အစစ အသုံးတော်ခံခဲ့သော ဒေါက်တာမြသီတာ ကို ထိုစဉ်က ဦးဟိန်းဇံ အထူး သဘောကျခဲ့ပြီး..အကြိမ်ကြိမ်ဘဲ သူမ နဲ့ ချစ်တလင်းခေါ်ခဲ့ပေသည် . .။ ဒါတွေကို ပြန်လည်သတိရမိတော့ ဦးဟိန်းဇံ ..ဒုံးကနဲ စိတ်တွေ ထကြွသွား သည် ။ တော်တော့်ကို လှတဲ့ ကောင်မလေး ပါ ..။ သမီး..မြသီတာ . . အန်ကယ်လ်ဇံ . . ဒီကိုလာစမ်း . . သူထိုင်နေရာကိုကပ်လာသောဒေါက်တာမြသီတာကိုဆွဲကာ..သူ့ပေါင်ပေါ်ထိုင်စေ သည် ..။ သူမဖင်အိအိတွေ သူ့ပေါင်ပေါ်ဖိကပ်လာတော့ သူ့ပေါင်ကြား က လိင်တန်ကြီး က ထောင်ထလာသည် ..။ သမီး က လှလိုက်တာ ..အမြဲလှနေတဲ့ သမီး..ဘဲ . . သူမ ခါးသိမ်လေးကို ဆွဲဖက်လိုက် သည် ..။ နီးကပ်နေတဲ့သူမ..လည်ကုတ်ဖွေးဖွေးလေးကိုလဲ နမ်းလိုက်သည် . .။ ချစ်တယ် သမီးရယ် . . သမီး ဘာလုပ်ပေးရမလဲ . .စုတ်ပေးရမလား . . ဟင့်အင်း . .လိုးပေး . . အင်း..ရတယ်လေ . .ဒါနဲ့ လုပ်မပေးခင် တခု မေးလို့ရမလား . . မေး..ဘာလဲ . . ဟိုလေ .. အန်ကယ်လ်ဇံ့..ပတ်ဝန်းကျင် က မိန်းမတွေ အားလုံး အန်ကယ်လ်ဇံ နဲ့ လွတ်ရဲ့လား . .ဆိုတာ သမီးကို ပြောပြပါလား . . သမီးက အန်ကယ်လ့် ကို အတက်က် လုပ်နေတာလား ..သမီး .. မဟုတ်ပါဘူး . .ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်ကို ဘယ်သူ က အတက်က်လုပ်မှာလဲ . .သမီး သိချင်လို့သက်သက်ပါ . . အန်ကယ်လ့်..မိန်းမ တိုင်းကို မလုပ်ပါဘူးကွယ် . . သိမ့်သိမ့်သူ နဲ့ ရော ..အန်ကယ်လ် လုပ်လား . . အင်း . .သိမ့်သိမ့်နဲ့တော့ ဖြစ်ဖူးတယ် . . ဒေါက်တာမြသီတာ ဦးဟိန်းဇံရဲ့ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဦးဟိန်းဇံရဲ့ လုံချည်ကို လှန်တင် သည် ..။
တုတ်တုတ် မဲမဲ လိင်တန်ကြီး က အမွေးဖါးဖါးကြားမှာ ထောင်ထနေသည် .. ။ ဒေါက်တာမြသီတာ လိင်တန်မဲမဲကြီး ကို ငုံကာ စုတ်ပေးပြီ . .။ သူမရဲ့ နွုတ်ခမ်းလှလှလေးကြား..ဦးဟိန်းဇံ ရဲ့ လိင်တန်ကြီး ..ရောက်နေပြီ.. ။ အစုတ်ကျွမ်းကျင်လှတာကြောင့်ဦးဟိန်းဇံသည်ခေါင်းကို..မော့ကာ..တအင်းအင်း နဲ့ အရသာထူးနေသည် ..။ အို..သမီးရယ်. .. ဒေါက်တာမြသီတာ ရဲ့ လျာလေး က ပြေးလွားနေသည် . .။ လိင်တန်တလျောက်မှာရော..လိင်တန်ရဲ့ ဒစ်ကားကားကြီးကြားမှာရော .. ထိုးမွေပေးနေသည် .. ။ အတန်ကြာစုတ်ပေးပြီးမှ သူမ ထမိန်ကို ခါးအထိမတင်ကာ ဦးဟိန်းဇံ ရဲ့ အပေါ်ကို ခွတက်ခါ သူမလက်ကလေးနဲ့ သူ့လိင်တန်ခေါင်းကို ဆွဲပြီး သူမ အင်္ဂါစပ်ဝမှာ တေ့လိုက် သည် . .။ စိုနေတဲ့ အင်္ဂါစပ်နဲ့ ထိတွေ့တာ ဦးဟိန်းဇံ သိလိုက်သည် ..။ ဒေါက်တာမြသီတာ ခပ်ဖြေးဖြေးထိန်းပြီးထိုင်ချလိုက် သည် . .။လိင်တန်ကြီး တဖျစ်ဖျစ် နဲ့ ဒေါက်တာမြသီတာ ရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲ . .ဝင်ချသွား သည် ..။ အို . .ဦးဟိန်းဇံ က သူမခါးလေးကို ဆုတ်ကိုင်ထားသည် . .။ ဒေါက်တာမြသီတာ..ဖင်တွေကိုကြွကာကြွကာ နဲ့ အပေါ်ကနေညှောင့်ပေးနေပြီ ။ ကောင်းလိုက်တာ သမီးရယ် . . ဒေါက်တာမြသီတာ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ညှောင့်ပေးနေသည် . .။ အပြင်မှာစားပွဲတလုံးနဲ့ရှိနေသော..ဦးဟိန်းဇံရဲ့ကိုယ်ရေးတာဝန်ခံလေးလေးနွယ်.. သည် အမ်ဒီ ရဲ့ အခန်းထဲက ညည်းသံလိုလိုကြားမိလို့ အခန်းထဲမှာ ဘာတွေ များဖြစ်နေသလဲ ..သိချင်နေသည် ..။ ဒေါက်တာမြသီတာကတော့ အားနဲ့ကို ကြုံးကြုံး ဆောင့်ပေးနေပြီ . .။ အန်ကယ်လ့်အတွက်ဆိုရင် . ..သမီးက အမြဲ အသင့်ပါဘဲ အန်ကယ်လ်ရယ် . . ဦးဟိန်းဇံ သည် သူ့ ရှေ့ကို ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ နဲ့ ရိုလင် ရှိုင်းပေးထားသော ..လေ့ကျင့်ပေးထားသော မုတ်သုန်လမင်း ဆိုတဲ့ .. ကောင်မလေး ကို အကဲခတ်နေသည် .. ။
ဒါက လူတွေ့ကြည့်တာဖြစ်သည် ..။ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ နဲ့ရိုလင်မော် က အစောပိုင်း စပြီး သင်ကြားလေ့ကျင့်နေကထဲက ဗွီဒီယို ရိုက်ထားပြီး … ဦးဟိန်းဇံဆီကို တင်ပြပြီးသား ဖြစ် သည် .. ။ အင်း.ကိုယ်လုံးလေးကအသားကပ်ဝတ်စုံနဲ့မို့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း..သိသာ..လှ သည်လို့ ဦးဟိန်းဇံထင်သည် . .။ ဒီမုတ်သုန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေး.. . .အဝတ်မပါဘဲ ရေချိုးနေစဉ်မှာ တိတ်တဆိတ် ဗွီဒီယို ရိုက်ထားတာတွေကို မနေ့ညကဘဲ . .ဦးဟိန်းဇံ ကြည့်ပြီး ဖြစ် သည် . .။ဖြူဝင်းတောင့်တင်းတဲ့ နို့တွေ ဖင်တွေ …ပေါင်တန်တွေ ကို.. အခေါက်ခေါက်အခါခါ သူ ကြည့်ခဲ့သည် ။ ဦးဟိန်းဇံ သည် သည်လို စပွန်ဆာ လုပ်ပြီး မိန်းမချောလေးတွေကို မော်လ်ဒယ်လ်မလေးတွေ ဖြစ်အောင် ဗွီဒီယို မင်းသမီးလေးတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနေတာ တော်တော်ကြာပြီ . .။ ဦးဟိန်းဇံ သည် ဒီကောင်မလေးတွေ ကို စားချင်ဝါးချင်တာတခုထဲ သက်သက် နဲ့ ဒါတွေ လုပ်နေတာ မဟုတ်ပေ . .။သူ သည် ကျိကျိတက် ချမ်းသာသူ စီးပွါးရေးသမားကြီးတယောက် ဖြစ်လို့..သူ စားဝါးချင်ရင်..စားဝါးနိုင်တဲ့ မိန်းမချောလေးတွေ တပုံကြီးပါ .. ။ သူ ဒီလို စပွန်ဆာတွေ လုပ်နေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က…သူ..စပွန်ဆာပေးသူကောင်မလေးတွေ..ဟာ..ထိပ်တန်းအဆင့် ရောက်လာကြတယ်ဆိုတဲ့နံမည်.ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောမွုကိုလဲသူ…သဘောကျ လို့ဖြစ်သည် . .။ ဦးဟိန်းဇံ သည် သူတင်ပေးတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ကို .. အတင်းအဓမ္မ ကြံစည်တာ..အနိုင်ယူတာတွေ မလုပ်ပေ . .။ သူ တင်ရင် ထိပ်တန်း ရောက်တာများ သည် . .။ ကောင်မလေးတွေ ဟာသူ့ကြောင့်သူတို့တတွေ..ထိပ်တန်းရောက်ပြီး..လက်ဖျား ငွေသီးပြီးနံမည်ကြီး ကျော်ကြား တဲ့ဘဝ ရောက်ကြရတာမို့ . .ဦးဟိန်းဇံ ကို သူတို့ ကိုယ်တိုင်က ကျေးဇူးရှင်ကြီးအဖြစ် ..ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ အနေနဲ့ .. လာကျွေးလေ့ ရှိပေ သည် ..။ ရှေးခောတ်ကအရည်းကြီးတွေပန်းဦးလွတ်သလို..အပျိုစစ်စစ်..မော်ဒယ်လ်မလေး တွေကသူတို့အပျိုစင်ပန်းကလေးတွေကိုကျေးဇူးရှင်ကြီး..စပွန်ဆာ….အန်ကယ်လ် ကြီးကိုလာ..ဆက်သတတ်ကြတာကြောင့်ဦးဟိန်းဇံသည်..ကောင်မချောချောလေး တွေကို အမြဲ စားသုံးနေရတဲ့ ..ကြောင်ဘားကြီးတယောက် ပါဘဲ . .။ အခုလဲ မုတ်သုန်ကို ဦးဟိန်းဇံခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်နေသည်။ တော်တော်လန်းတာဘဲ ။ မသိမ့်နဲ့ ရိုလင်တို့ လေ့ကျင့်ပေးကြတာနဲ့ ၃လအတွင်းမုတ်သုန်ရဲ့ကိုယ်လုံးလဲပိုလှလာသလို..လမ်းလျောက်ပုံ..ကိုယ်နေဟန် ပန်တွေလဲ ပိုကြည့်ကောင်းလာသည် . .။ မုတ်သုန် လမင်း သည် တခါတရံ ဦးဟိန်းဇံနဲ့ နေ့လည်စာအတူစားရ သည် . .။
စီဒိုးနား ..ထရေးဒါး စတဲ့ ဟိုတယ်လ်ကြီးတွေမှာ ဦးဟိန်းဇံနဲ့ စားသောက်နေတာကိုတွေ့တာနဲ့လူတွေကဦးဟိန်းဇံရဲ့စပွန်ဆာ..အသစ်ကလေး ဖြစ်မည်ဆိုပြီး . .လူတွေ စိတ်ဝင်စားကြသည် . .။ဦးဟိန်းဇံ ရဲ့ စပွန်ဆာတွေက ထိပ်တန်းနံမည်ကျော်တွေချည်း.ဖြစ်လာတာမို့ဒီတယောက်လဲ..ဘယ်လိုနေမလဲ ဆိုပြီး . .ဂျာနယ်တွေက ရေးကြပြီ . .။ မုတ်သုန်သည်လပိုင်းအတွင်း…အရှင်မွေးတော့နေ့ချင်းကြီး..ဆိုတဲ့စကားလိုဘဲ.. တရှိန်ထိုး လူသိများလာပြီ ။ .မုတ်သုန်လဲသူမကိုဦးဟိန်းဇံနဲ့..ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ ဇော်ဇော်လတ်တောင် သူမကိုရေရေလည်လည်ကိုင်သည်..နှိုက်သည်..နို့စို့သည် . .။ သို့ပေမဲ့..တကယ်..စပွန်ဆာပေးသောအန်ကယ်ကြီးဦးဟိန်းဇံ..ကတော့..သူမကို ယခုတိုင်..လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိမတို့သေး..။ ကိုယ့်ခြံထဲက ကြက် ဘယ်တော့ ရိုက်သတ်စားစားရတာဘဲ ဆိုပြီး..အေးအေးဆေးဆေးလုပ်နေရော့သလားတော့ မသိဘူး .. လို့ မုတ်သုန် စဉ်းစားနေသည် .. ။ စပွန်ဆာ ကောင်းဖို့လိုသည် လို့ လူတွေ ပြောပြောနေတာ တကယ်မှန်တာဘဲ . .။ မုတ်သုန်သည် မော်လ်ဒယ်လ်ရှိုးပွဲတွေမှာ တခါနှစ်ခါဘဲ လမ်းလျောက်ရသေး သည် . .။ ကြော်ငြာရိုက်ချင်သူတွေ..တပုံကြီးကမ်းလှမ်းလာ သည် ..။ ရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့… လမ်းဆုံလမ်းခွတွေမှာ မုတ်သုန်ရဲ့ ပုံနဲ့ ကြော်ငြာကြီးတွေ တွေ့နေရပြီ . .။ ညပိုင်းမှာ ဦးဟိန်းဇံ သည် သူ့တပည့်ရဲမြင့်ကို မောင်းခိုင်းပြီး လင့်ကရူဆာကားကြီးနဲ့ရန်ကုန်မြို့တပတ်..သူတင်ခိုင်းထားတဲ့…မုတ်သုန်လမင်း ရဲ့ ကြောငြာပိုစတာကြီးတွေ ကို လိုက်ကြည့်သည် . .။သူသည် ဒီလိုငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး ကြောငြာလေ့ ရှိသည် .. ။ကြော်ငြာသလောက်လဲအ ကျိုးထူးသည် . .။ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဘဲ . .ဗွီဒီယို ထုတ်လုပ်သူတွေ မုတ်သုန်ဆီကို စပြီးဆက်သွယ်လာသည် ။ဒီအခါမှာမှ ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ ပြောပြလို့ ဦးဟိန်းဇံ ကိုယ်တိုင်ပိုင်တဲ့ ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးတွေ ရှိကြောင်းသိလာရပြီး . .မုတ်သုန်ကို သူပိုင်ကုမ္ပဏီ ကနေဘဲ စင်တင်ပြီး စတင် ရိုက်ကူးမှာ လို့ သိရှိလိုက်ရ သည် . .။ မုတ်သုန်သည်ဦးဟိန်းဇံရဲ့စပွန်ဆာကောင်းမွုကြောင့်..တမဟုတ်ချင်း..နံမည်ကြီး လာ့သည် . .။ပိုပြီးနံမည်ကြီးသွားစေရတာကတော့ ဦးဟိန်းဇံ ပိုင် အလှကုန် ပစ္စည်းတွေအတွက်ကြောငြာကို..မုတ်သုန်က.စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့..ထိုင်းမှာသွားရိုက်ရ လို့ဖြစ်သည် .. ။မုတ်သုန် တည်းခိုရာ ဟိုတယ်လ် ကို ဦးဟိန်းဇံ ညပိုင်းမှာ ရောက်လာ သည် .. ။ ကြော်ငြာတာဝန်ယူ ရိုက်ပေးသော နံမည်ကြီး .. ဒါရိုက်တာကြီး တော့မပါ ..။ ဦးဟိန်းဇံတော့ သူမကို ဒီည လုပ်တော့မည် လို့. မုတ်သုန်ထင်ထားသည် ။ သူ့ကျေးဇူးတရားတွေက..အရမ်းကြီးမားလှတာကြောင့် သူ လုပ်ရင်လဲ မုတ်သုန်က ကြည်ဖြူစွာနဲ့ ပေးဆပ်ဖို့ အဆင်သင့်ပါဘဲ .. ။ သို့ပေမဲ့ ..အန်ကယ်ကြီး သည် ကျောလေး ပွတ်သွားတာကလွဲပြီး မုတ်သုန် ကို ဘာမှ မလုပ် ..။အမေရိကန်ငွေတထပ်ကြီး စားပွဲပေါ်ထားသွား သည် ..။
မုတ်သုန်လေး …သုံးဖို့တဲ့ . .သုံးသာသုံး…သုံးမှ အန်ကယ်လ်ကြိုက်တယ် . .တဲ့ ..။ ထိုင်းနဲ့ စင်ကာပူက ပြန်လာတော့ မုတ်သုန်လမင်းပိုပြီး ကျော်ကြားလာ သည် .. ။ စာနယ်ဇင်းတွေကိုလဲ အန်ကယ်လ်ကြီး က မုတ်သုန်ကို မျက်နှာဖုံးတွေမှာ ထည့်စေ သည် .. ။ မုတ်သုန်သည် သူငယ်ချင်းကိုင်ရာကို ပြန်ကြည့်သည် . .။ အန်ကယ်လ်ကြီး ကို ပြောပြပြီး ကိုင်ရာကို သူ ကြည့်ရွု သည် . .။ အန်ကယ်လ်ကြီး က သူ့အိမ်မှာ ကိုင်ရာကို အလုပ်ပေးထားသည် .. ။ ဟုတ်တိပတ်တိ ဘာမှ လုပ်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ..။ ကိုင်ရာ့ကို..ကာရာအိုကေတုံးက ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်ခဲ့နို့စို့ခဲ့သောဘိုနီ သည် အခုကိုင်ရာအနားကို လုံးဝ မကပ်နိုင်တော့ .။ကိုင်ရာ သည် မုတ်သုန် ကောင်းစားလာတာကြောင့် ..မုတ်သုန် အနားမှာနေလို့ . .ဒီဇိုင်း က အရမ်း မိုက်နေပြီ ။ မုတ်သုန်သည်အန်ကယ်ကြီးဦးဟိန်းဇံ ရဲ့ စပွန်ဆာ ပေးမွုကြောင့် နံမည်ကြီး မော်ဒယ်လ်တယောက် ဖြစ်လာရုံမက မြစ်ကြီးနားမှာ ရှိနေတဲ့ ချို့တဲ့ ကြသော မုတ်သုန်ရဲ့ အဖေနဲ့ အမေ ကို ..ဦးဟိန်းဇံ က အိမ်တလုံးဝယ်ပေးကာစီးပွါးလုပ်ဖို့လဲငွေတွေသိန်းထောင်ချီပြီး…ထုတ်ပေးခဲ့တာ ကြောင့်..မုတ်သုန် ရဲ့အဖေနဲ့အမေသည်..အရင်ကလိုမဆင်းရဲမနွမ်းပါးတော့ပေ . .။ မုတ်သုန် ရဲ့ ဖုန်းလေး …တုတစ်တုတစ် နဲ့ မြည်လာ သည် . .။ ဟယ်လို . .မုတ်သုန်လမင်း ပါ . . မုတ်သုန်..ကိုယ်ပါ ဇော်ဇော်လတ် . .. အို..ကိုဇော်. . နံမည်ကြီးသွားလို့ ကိုယ့်ကို မေ့သွားပြီလား . ..မုတ်သုန် . . ဟို..ဟို..မမေ့..မမေ့ပါဘူး . .ကိုဇော်ကလဲ . .မုတ်သုန်က ဒီလို မေ့တတ်တဲ့ သူ မဟုတ်ပါဘူး . . . မုတ်သုန် ကို ကိုယ် တကယ်ဘဲ ဆက်သွယ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ အခု လက်တွေ့ဘဲ မဟုတ်လား . . . ဟုတ်…ဟုတ်..ပါတယ် . ..ကိုဇော်. . ကိုယ့်ကို ကျေးဇူး ဆပ်မယ်ဆို . . ဆပ်မှာပေါ့ . .ကိုဇော်.. ဘာစားမလဲ . .ငွေဘယ်လောက် လိုချင်လဲ . . အော်. .မုတ်သုန်…မုတ်သုန် . . .မသိချင်ယောင်ဆောင်မနေပါနဲ့ ကွာ . .ကိုယ် ဘာကို လိုချင်တယ် ဆိုတာ မုတ်သုန် သိပါတယ် . . ကိုဖော်ရယ် . .မုတ်သုန် ရဲ့ စပွန်ဆာ အန်ကယ်လ်ကြီး သိသွားရင် ရွေစိတ်တော် ဆိုး မှာလဲ စိုးရသေးတယ် . . အန်ကယ်ကြီး မသိစေရပါဘူး . .မုတ်သုန်ရယ် . .ပြီးတော့ ကိုယ်က မုတ်သုန် ရဲ့ အပျိုစင်ပန်းကလေး ကို မခူးလိုက်ချင်ပါဘူး . .အန်ကယ်ကြီး အတွက်အထူးလက်ဆောင်လေး.အဖြစ်မုတ်သုန်ဘဲ…သိမ်းထားပါ…ကိုယ်လိုချင် တာ က မုတ်သုန် ပေးနိုင်တဲ့ ဟာပါ . .ဒါဆို သဘောပေါက်ပြီလား . . မပေါက်သေးဘူး . .ကိုဇော်. .မုတ်သုန် က တောသူ ..ဘွင်းဘွင်းပြောမှဘဲ သိမယ် ကိုဇော်လိုချင်တာ ဘာလဲ . . ကိုယ် လိုချင်တာ မုတ်သုန် ရဲ့ နွုတ်ခမ်းလှလှလေး နဲ့ ကိုယ့် ကို ပုလွေကိုင်ပေးတာကိုဘဲ ..ကဲ …ဘာမှလဲ မပွန်းမပဲ့သွားဘူး . .ဘယ်လိုလဲ ဖြစ်မလား . . အင်း . .မုတ်သုန် ခုလို ဖြစ်လာတာ ကိုဖော် ဆက်သွယ်ပေးလို့ ပါ ..မုတ်သုန် ပေးရမှာပေါ့ … မပြီးသေးဘူး..မုတ်သုန်. .တခုကျန်သေးတယ် . . ဘာလဲ ကိုဇော် . . မုတ်သုန် ပုလွေကိုင်ပေးလို့ ကိုယ့်စိတ်တွေ တအားထန်လာပြီး … ဖြုတ်ချင်လာရင် ဖြုတ်ဖို့ ကောင်မလေးတယောက်လဲ ခေါ်ခဲ့ရမယ် . .ကိုင်ရာ ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ် . .ကိုင်ရာ့ကို ဖြုတ်ချင်တာ ကြာပြီ . . ကိုင်ရာ့ ကို ဘေးဖယ် ထားလို့မရဘူးလား . . မရဘူး . .မုတ်သုန် သူ့ကို ခေါ်လာတာကမုတ်သုန်အတွက် ..ပိုကောင်းတာပေါ့ ..တခြားသူ ခေါ်လာရင်..မုတ်သုန် ကိုယ့်ကို ပုလွေကိုင်ပေးတာတွေ သိသွားမှာပေါ့ မုတ်သုန် သည် တကယ်တမ်း ဇော်ဇော်လတ် ဆီကို မသွားဖြစ်ပါ . .။
ကိုင်ရာ လဲ အဖြုတ်မခံရပါ . .။ မုတ်သုန် သည် စပွန်ဆာ အန်ကယ်လ်ကြီး ကို ဖော်ဇော်လတ် ခေါ် တော်မီ သူမ ကို ဒီလို တောင်းဆိုကြောင်း ..ငိုပြီး တိုင်တမ်းလိုက်သည် .။ ဦးဟိန်းဇံ က သူမ ကျောလေးကို ပွတ်ရင်း . . စိတ်မပူနဲ့….. မုတ်သုန်..သမီးကို ဘယ်သူမှ သမီး စိတ်မပါဘဲ ..အနိုင်ကျင့်လို့မရဘူး . .လို့ ပြောပြီး . .သူ တာဝန်ယူ လိုက် ပြီ လို့ ပြောသည် . .။ သူ ဘယ်လို လုပ်လိုက်သလဲတော့မသိ . .ဇော်ဇော်လတ် ကို မုတ်သုန် လုံးဝ မတွေ့ရတော့ …။သူမကိုလဲ ဘယ်တော့မှ မဆက်သွယ်လာတော့ . .။ ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ ကို မေးကြည့်တော့ …အန်ကယ်လ်ကြီး သည် ဥပဒေ နဲ့ မကင်းတဲ့ သတ်တာတို့ ရိုက်တာတို့ . .ဘယ်တော့မှ မလုပ်တတ်ဘူးတဲ့ ..။ ဇော်ဇော်လတ် ခေါ် တော်မီ ကို နိုင်ငံခြာ တိုင်းပြည်တခုခုမှာ အလုပ် ခိုင်းထားတာမျိုးဘဲ ဖြစ်မှာပါ . .လို့ ရှင်းပြ သည် .. ။
သိမ့်သိမ့် . . ရှင် . . လာအုံး . .ဇက်ကျော နဲနဲဆွဲပေးပါအုံး . . ဟုတ်ကဲ့ . . သိမ့်သိမ့်သူ ချက်ချင်းဘဲ အလုပ်လုပ်နေရာက ထလာပြီး ဦးဟိန်းဇံ ကို ဇက်ကျောဆွဲပေးသည် ။ ဦးဟိန်းဇံ..ဒါကြောင့်ဒီမိန်းကလေးကို..သဘောကျတာ..။သူတင်ပေးလို့ သိမ့်သိမ့်သူ သည် နံမည်ကြီး မော်လဒယ်လ်တယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ယခုဆိုရင်သူမ အသက်နဲနဲလေး ကြီးလာတော့ မော်လ်ဒယ်လ်သင်တန်းတွေ ဖွင့်..ဆံပင်နဲ့ မိတ်ကပ်ဆိုင်တွေ ဖွင့်ပြီး ..အရမ်းချမ်းသာနေပြီ . .။ သို့ပေမဲ့. .သူခေါ်လိုက်ရင်…ချက်ချင်းပြေးလာပြီး ခိုင်းတာကို လုပ် သည် . .။ သိမ့်သိမ့်သူ ကို သူဘဲသင့်တော်တဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့ ..အိမ်ထောင်ချပေးခဲ့ သည် ..။သိမ့်သိမ့်သူ နံမည်ကြီးခါစကတော့ ဦးဟိန်းဇံနဲ့ ဖြစ်ခဲ့သည် . .။ သိမ့်သိမ့်သူ ရဲ့ အပျိုစင်ပန်း ကို ဦးဟိန်းဇံ ရခဲ့ သည် .. ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်မှာတော့ ဦးဟိန်းဇံ သည် အလုပ်ခိုင်းတာကလွဲပြီး သိမ့်သိမ့်သူ နဲ့ ဘာမှ မညိစွန်းတော့ ..။ သိမ့်သိမ့်သူရဲ့..ယောင်္ကျား..ခင်မောင်သိန်းသည်…..သူအားကိုးရတဲ့..တပည့်တ ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ သည် ..။ အခု သိမ့်သိမ့်သူ ကို သူခေါ်ပြီး နှိပ်ခိုင်းသည် . .။ နီးကပ်လှလို့ သိမ့်သိမ့်သူ ရဲ့ကိုယ်က အကောင်းစား ရေမွေးနံ့ ကို သူ ရနေသည် .. ။ တိမ်းမူးစရာ အနံ့ ဖြစ်သည် . .မသိမသာသိမ့်သိမ့်သူကို..အနီးကပ်ကြည့်သည် အင်း . .သိမ့်သိမ့် တော်တော် တောင့်တင်းတုံးဘဲ .. ။ သိမ့်သိမ့် . .ခင်မောင်သိန်းကော . . သူ ..ဘန်ကောက်မှာလေ . .အန်ကယ်လ်ဇံ သိတယ်မှတ်လို့ . . အော်..အေး..ဟုတ်သားဘဲလေ . . သိမ့်သိမ့် ရဲ့ စွင့်ကားတဲ့ ဖင်တွေက တပ်မက်စရာ ကောင်းတုံးဘဲ . .။ တချိန်တုံး က သူ ကောင်းကောင်း ကိုင်ခဲ့နယ်ခဲ့တဲ့ ဖင်တွေပေါ့ .. ။သူ့ကို အနောက်ကနေနှိပ်နေတဲ့ သိမ့်သိမ့်သူကို သူ အရှေ့ကိုဆွဲယူကာ … ဖက်လိုက်သည် . .။ ဘာလုပ်ပေးရမလဲဟင် . .အန်ကယ်လ်… သိမ့်သိမ့် ကြည့်ကောင်းလို့ ..လှတယ် . . ဘယ်နေရာက လှတာလဲဟင်… အကုန်လုံးပေါ့ . . အန်ကယ် လဲ ကြည့်ကောင်းဆဲဘဲ ..အသက်၅၀ ရွယ်နဲ့ မတူဘူး .. ၄ဝလောက် ထင်ရတယ် . . အံမယ်. .သိမ့်သိမ့်က မြှောက်နေပြန်ပြီ . .။
တကယ်..ဒါနဲ့ မုတ်သုန် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး . .အန်ကယ် မကြိုက်လို့လား သူနဲ့ မအိပ်ဖြစ်သေးဘူး မဟုတ်လား . . အင်း ..သူက မဆိုးပါဘူး . .ဒါပေမဲ့ သိမ့်သိမ့်လို မဟုတ်ဘူး . .သိမ့်သိမ့်က အခုတောင် မြင်ရတာနဲ့ အန်ကယ် စိတ်ထဲ ရင်ခုန်တယ် . . အံမယ်. .အန်ကယ် ကမြှောက်ပြောနေပြန်ပြီ.. . .ဘာစားချင်လဲ..သိမ့်ကျွေးမယ် . . စားတော့မစားချင်ဘူး . .အဲ..ကြည့်တော့ ကြည့်ချင်သလိုဘဲ . . ဘာကိုလဲ . . သိမ့်သိမ့် ရဲ့ ဟောဒီ သိပ်တောင့်တဲ့ ဖင်တွေကိုပေါ့ . . ဦးဟိန်းဇံ က သိမ့်သိမ့်သူ ရဲ့ ဖင်တွေကို အသာ ပွတ်ရင်းပြောလိုက်သည် .။ ရတာပေါ့ . .အန်ကယ့်အတွက် ဆို အဲနီးတိုင်းပါ . . သိမ့်သိမ့်သူကသူ့စားပွဲကြီးမှာလက်ထောက်ပြီးကိုယ်ကို..ညွှတ်ကုန်းလိုက်ပြီးသူ မ ထမိန်ကို ခါးအထိလှန်တင်လိုက် သည် ..။ပြီးတော့ ပင်တီအဖြူလေးကို ချွတ်ချလိုက်သည် ။ အိုး . .လှလိုက်တဲ့ ဖင်တွေ . .။ တောင့်တင်းဆဲဘဲ ..။ ဖင်တွေကြားက အဖုတ်ကြီးက မြောင်းလိုက်ကြီး ပြူးထွက်နေသည် . .။ သူ ကိုင်ပြီ..။ ပထမ..ဖြေးဖြေးပွတ်တာ..။နောက်ပိုင်း ဆုတ်နယ်သည် .. ။ အဖုတ်ကို လဲ ကိုင်သည် ..။ လှလိုက်တာကွာ . . သိမ့်သိမ့် မျက်လုံးတွေ စုံမှိတ်ထားသည် ..။ ခင်မောင်သိန်းမရှိတော့ သိမ့် ဆက်စ် မလုပ်တာ ကြာပြီပေါ့နော် . . အင်း …ကြာပြီ..သိမ့်ကိုရော ပြမလား . . ဘာကိုလဲ . . အန်ကယ့် လီးကို . .မတွေ့တာ နှစ်တွေ နဲ့ ချီနေပြီ . . ကြည့်လေ . . သူ လုံချည်ကို ဖြေချလိုက်သည် . .။ တုတ်ပြီးရှည်တဲ့…အကြောတွေထောင်ထနေတဲ့သူ့ငပဲကြီးက..တောင်မတ်နေသ ည် . .သိမ့်သိမ့်သူကသူ့ငပဲကြီးကို…သေသေချာချာကြည့်ပြီးသက်ပြင်းချသည် ..။ သိမ့်လေ . .ဒါကြီးကို တကယ်စွဲခဲ့တယ်သိလား . .ခင်မောင်သိန်းဟာ နဲ့ တခြားစီဘဲ . . လာ . . သူ သူမကို ဆွဲကာ သူ့ရှေ့ ထိုင်ချစေ သည် ..။သိမ့်သိမ့်သဘောပေါက်သည် ..။သူ့လီးတုတ်ကြီးကို သိမ့်ငုံကာ စုတ်လိုက်သည် .. ။အား..ကောင်းလိုက်တာ သိမ့်ရယ်. …စုတ်..စုတ်..လျာလေးနဲ့ လုပ်ပေးပါအုံး . .။
ဒစ်ကြားထဲကို… လျာထိပ်နဲ့ ထိုးပေးသည် . .။သိမ့်သိမ့်သည် ဦးဟိန်းဇံ သင်ပေးခဲ့လို့ .. လီးအစုတ်တော်တော်ကျွမ်း သည် . .။ သိမ့်သိမ့်သူ သည် စိတ်ပါလက်ပါ ..အန်ကယ်လ်ကြီး လီးကို စုတ်ပေးနေသည် ..။ ကောင်းလိုက်တာ သိမ့်သိမ့် ရယ် . .. စုတ်နေတုံး..သိမ့်သိမ့် လက်က ဦးဟိန်းဇံ ရဲ့ ဂွေးစိတွေ ကို ပွတ်ပေးနေသည် .။အားရပါးရ စုတ်တာကြောင့် တချက်တချက် ပြွတ် ..ပြွတ် ဆိုပြီး အသံထွက်ထွက်လာ သည် . .။ ဦးဟိန်းဇံ ရဲ့ ရုံးခန်းကြီးသည် တိတ်ဆိတ်နေသည် . . ။ တချက်တချက် ..ဦးဟိန်းဇံရဲ့ အင်း..ဟင်းဟင်း . .လို့ ညည်းလိုက်တဲ့ အသံ ထွက်လာတတ်သလို သိမ့်သိမ့်သူ ရဲ့ လီးစုတ်တဲ့ ပြွတ်ပွက် ..ဆိုတဲ့ အသံတွေ တချက်တချက် ကြားရ သည် ..။ အပြင်ဖက်မှာ ထိုင်တဲ့ .. သူ့ ကိုယ်ရေးအတွင်းရေးမွူး လေးလေးနွယ် သည် ဘော့စ် ကို တံခါးအသာဟပြီး ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။စောစောက ဘော့စ်အနားမှာ ကွန်ပြူတာ တလုံး နဲ့ အလုပ်များနေတဲ့ သိမ့်သိမ့်သူ သည် သူမ ထိုင်နေတဲ့ စားပွဲမှာ ရှိမနေတော့။ အို..လေးလေးနွယ် တွေ့သွားသည် ..။ အို . .သိမ့်သိမ့်နွယ် သည် ဘော့စ်ရှေ့မှာဒူးထောက်ထိုင်ပြီး ဘော့စ်လိင်တန် ကို စုတ်ပေးနေပါလား . .။ ဘော့စ် သည် တချက်တချက် ခေါင်းမော့ကာ ညည်းနေသည် . .။ လေးလေးနွယ် . .သူမချောင်းနေတာ ဘော့စ်တွေ့သွားရင်လဲ မလွယ်ဘူး .. ။ တော်ကြာ အလုပ်ထုတ်ပစ်နေရင်အခက် . ဆိုပြီး ဆက် မချောင်းရဲတော့ .. ။ လေးလေးနွယ် . .စိတ်တွေတော့ လာ နေသည်. .။ ရှိန်းရှိန်းဖိန်းဖိန်း ဖြစ်နေသည် ။သူမလဲ သိမ့်သိမ့်သူ လို ဘော့စ်ရဲ့ လိင်တန်ကို စုတ်ခွင့်ရရင် ဘယ်လောက်များ ကောင်းမလဲ စိတ်ထဲ စဉ်းစားနေသည် . .။ မုတ်သုန်လမင်း ရဲ့ နံမည်ဟာ တစတစ နဲ့လူသိများလာသည် ။ ဦးဟိန်းဇံပိုင် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေပြီး မုတ်သုန်လမင်း ကို နံမည်အကြီးဆုံး မင်းသား တယောက်စီနဲ့ဗွီဒီယိုကား ၃ကား စရိုက်သည် . .။ တကားကို နိုင်ငံခြားမှာ ရိုက်သည် . .။သူများထက် ထူးခြားအောင် . .ဒူဘိုင်း မှာ ရိုက်သည် ..။ ဦးဟိန်းဇံ ရဲ့ စပွန်ဆာ မို့ ..မုတ်သန်လမင်း..နံမည် တဟုန်ထိုးကြီးမား လာပြီ …။ မုတ်သုန်လမင်း . .နံမည်ကြီးဗွီဒီယို မင်းသမီး ဖြစ်လာသည် ..။ ဝင်ငွေ အရမ်းမြင့်တက်လာသည် .. ။ မုတ်သုန်..တောင်းတဲ့ဈေးနဲ့..အလုအယက်တောင်းရိုက်ကြတဲ့အထိ … ဖြစ်လာသည် .. ။ မုတ်သုန် သည် ကိုင်ရာ ကို သူမပါဝင်တဲ့ ဗွီဒီယိုကားတွေ မှာ..ဇာတ်ပို့အဖြစ် ပါဝင်စေ သည် . .။ ကိုင်ရာ လဲ အဆင်ပြေလာ သည် ။ ကိုင်ရာသည် အရင်လို ခပ်ပြည့်ပြည့် မဟုတ်တော့ .. ။
မုတ်သုန်ကြောင့် ..အလှဖန်တီးရှင် ရိုလင်မော် က ကိုင်ရာကိုလဲ ထရိန်နာ ကောင်းကောင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့လို့ ကိုင်ရာ့ ကိုယ်လုံး သည် တော့ပ်အဆင့် ဖြစ်နေပြီ . .။ မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာ …အန်ကယ်လ်ကြီး ခေါ်ခိုင်းတယ် .. မရမ်းကုန်း က အိမ်ကို လာခိုင်းတယ် . . . ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ လာပြောလို့ မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာ ချက်ချင်း ထ ပြေးရသည် မရမ်းကုန်းက ခြံကျယ်ကြီးထဲ အန်ကယ်လ်ဇံ သည် မီးခိုးရောင် ကျောက်တုံးများ နဲ့ တထပ်တိုက်ပုလေး ဆောက်ထားတာ မကြာသေး ..။ အန်ကယ်လ်ဇံ ရဲ့ တိုက်တွေ အိမ်တွေ များစွာအနက် နောက်ဆုံး ဆောက်တဲ့ အသစ်ချပ်ချွတ် တိုက်ကလေးပါဘဲ .. ။ တိုက်ကလေး ရဲ့ အနောက်ဖက်မှာ ရေကူးကန် ပါ သည် . .။ အန်ကယ်လ်ဇံသည်ရေကူးကန်မှာ..ရေမှန်မှန်ကူးလေ့ ရှိသလို . .သူ့အနီးမှာ ဘီကီနီ ဝတ် ကောင်မလေးတွေ လဲ အမြဲလို ရှိနေတတ် သည် . .။ အခု မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာ တို့အန်ကယ်လ်ဇံရဲ့ခြံထဲ ..ရောက်သွားသောအခါမှာ အန်ကယ်လ်ဇံ ရဲ့ ဘော်ဒီဂတ်လဲ ဖြစ် ဒရိုင်ဘာလဲ ဖြစ်သော ရဲမြင့် နဲ့ အရင်ဆုံး တွေ့ကြရသည် ..။ ရဲမြင့်က သူတို့ ကို ခြံတံခါးဖွင့်ပေးလို့ ဖြစ်သည် . .။ ဘော့စ် . .ရေကူးကန်ဘေးမှာ ရှိနေတယ် … အန်ကယ်လ်ကြီး သည် ထုံးစံအတိုင်း အနှိပ်ခံနေသည် .. ။ နှိပ်နေကျ..သင်ဇာတော့ မဟုတ် . .။ တခါမှမတွေ့ဘူးသေးသည့်..အသစ်တယောက် . .အဝါရောင်..တောက်တောက် ဘီကီနီ တူးပိစ် နဲ့ . .။ အန်ကယ်လ်..မုတ်သုန်လမင်း နဲ့ ကိုင်ရာ ရောက်လာပါတယ် . . အဝါရောင်တောက်တောက်..ဘီကီနီ နဲ့ ကောင်မလေး က အန်ကယ်လ်ဇံ့ကို သတင်းပို့ သည် ..။အန်ကယ်လ်ဇံ က မှောက်အိပ်နေသည် . ။ ကောင်မလေး က သူ့ ကျောပြင်ကို တတောင် နဲ့ ထောင်းပေးနေသည် . .။ အန်ကယ်လ်ဇံ ..သမီးတို့ ကို ခေါ်တယ်ဆိုလို့ . .ပြေးလာတာ . . ဦးဟိန်းဇံ ထထိုင် သည် . .။ အေး . .အန်ကယ်လ် တိုတို နဲ့ လိုရင်းပြောမယ် . .အန်ကယ်လ် ..မင်းတို့၂ယောက် နဲ့ နိုင်ငံခြား ခရီးထွက်မယ် . .ရှစိနိုင်ငံ ခရီးပေါ့ . .အဲဒါ ပြင်ဆင်စရာ ပြင်ထားဖို့ပြောတာ . . ဟယ်. . ဟာ . . . မုတ်သုန် နဲ့ ကိုင်ရာ ရှစ်နိုင်ငံခရီးမှာ အန်ကယ်လ်ဇံ နဲ့ ဘယ်လိုတွေ ကြုံမလဲ..အန်ကယ်လ်ဇံ က သူတို့ ရဲ့ အပျိုစစ်စစ် ..ပန်းပွင့်ကလေးတွေကို ဒီတချီတော့ ချွေလေမလား .. ဆိုပြီး ရင်ခုန်နေကြ လေ သည် . . ပြီးပြီ . .။